Bit By Bit - Ethics - 6.6.4 na-eme mkpebi na ihu nke ejighị ihe n'aka
Ejighị ihe n'aka ọ dịghị mkpa na-eduga ịgba nkịtị.
Ebe nke anọ na nke ikpeazụ ebe m na-atụ anya ka ndị nchọpụta na-agbasi mgba bụ ime mkpebi na-enweghị mgbagwoju anya. Nke ahụ bụ, mgbe niile nkà ihe ọmụma na nhazi, nchọpụta nyocha gụnyere itinye mkpebi banyere ihe ị ga-eme na ihe ị ga-eme. N'ụzọ dị mwute, a ghaghị ime mkpebi ndị a na-adabere na ezughị ezu ozi. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-emepụta Encore, ndị nchọpụta nwere ike ịchọrọ ịma na ọ ga-eme ka onye uweojii leta gị. Ma ọ bụ, mgbe ha na-emepụta Contagion Emotional, ndị na-eme nchọpụta nwere ike ịchọrọ ịmara na ọ nwere ike ịkpata ịda mbà n'obi na ụfọdụ ndị na-eme ya. Ihe omume ndị a nwere ike ịbụ ndị dị ala, mana amaghị ha tupu nnyocha ahụ emee. Na, n'ihi na ọ bụghị na-eme atụmatụ n'ihu ọha na-enyocha ozi banyere ihe ọjọọ, ihe omume ndị a ka a na-amatabeghị.
Enweghị njirimara abụghị ihe gbasara nchọpụta mmadụ na afọ dijitalụ. Mgbe Belmont Report kọwara nyocha nke usoro ihe ize ndụ na uru, o kwetara n'ụzọ doro anya na ọ ga-esiri ha ike ịmata kpọmkwem. Otú ọ dị, nchekasị ndị a dịwanye njọ na afọ dijitalụ, na nke ụfọdụ n'ihi na anyị enwechaghị ahụmịhe na ụdị nnyocha a na akụkụ ụfọdụ n'ihi àgwà nke nyocha ahụ n'onwe ya.
N'iburu ihe ndị a na-ejighị n'aka, ụfọdụ ndị yiri ka ha na-akwado maka "dịka mma karịa mwute," nke bụ mbipute nke Akwụkwọ Precautionary . Ọ bụ ezie na ụzọ a ga-egosi ezi uche-ikekwe ọbụbụ amamihe-ọ nwere ike imerụ ahụ; ọ na-eme mkpọtụ; ọ na - emekwa ka ndị mmadụ lee ọnọdụ dị oke oke anya (Sunstein 2005) . Iji ghọta nsogbu na ụkpụrụ Precautionary, ka anyị tụlee Mmetụta Contagion. A na-eme atụmatụ ahụ iji gụnye ihe dị ka mmadụ 700,000, ọ bụkwa n'ezie ohere ụfọdụ na ndị mmadụ na-eme nchọpụta ahụ ga-emerụ ahụ. Mana enwerekwa ohere na nnwale ahụ nwere ike inye ihe ọmụma nke ga-abara ndị ọrụ Facebook na ọha mmadụ uru. Ya mere, ọ bụ ezie na ikwe ka nnwale ahụ bụrụ ihe ize ndụ (dị ka enwere ike ikwu okwu), igbochi nnwale ahụ ga-abụkwa ihe ize ndụ, n'ihi na ọ nwere ike ịmepụta ihe ọmụma bara uru. N'ezie, nhọrọ ahụ adịghị n'etiti ime nyocha ahụ dịka ọ mere ma ọ bụghị ime nchọpụta ahụ; e nwere ọtụtụ mgbanwe ndị nwere ike ime nhazi ahụ nke nwere ike mee ka ọ ghọọ ọkwa dị iche. Otú ọ dị, n'oge ụfọdụ, ndị nchọpụta ga-enwe nhọrọ n'etiti ime nnyocha ma ghara ime ya, na e nwere ihe ize ndụ na arụmọrụ na nkwụsị. Ọ bụ ihe na-ekwesịghị ekwesị ilekwasị anya nanị n'ihe ize ndụ nke ime ihe. N'ikwu ya n'ụzọ zuru oke, ọ dịghị ụzọ mgbapụ ọ bụla.
Ịgafe Ụkpụrụ Nchedo, otu ụzọ dị mkpa ị ga-esi chee echiche banyere ime mkpebi ndị a na-ejighị n'aka bụ ntakịrị ihe ize ndụ . Ụkpụrụ a na-anwa iji benchmark ihe ize ndụ nke otu ọmụmụ banyere ihe ize ndụ nke ndị sonyere na-etinye na ndụ ha kwa ụbọchị, dịka igwu egwu na ịkwọ ụgbọala (Wendler et al. 2005) . Ụzọ a bara uru n'ihi na ị na-enyocha ma ihe ọ bụla na-agbaso ihe ize ndụ ọ bụla dị ntakịrị dị mfe karịa ịchọpụta ọnọdụ nke ihe ize ndụ. Dịka ọmụmaatụ, na Contagion mmetụta, tupu ọmụmụ ahụ amalite, ndị na-eme nchọpụta nwere ike iji ihe ntanetịime nke News Feeds jiri nyocha na nke ọzọ News Feeds na Facebook. Ọ bụrụ na ha yiri otu ahụ, mgbe ahụ ndị nchọpụta ahụ nwere ike kwubiri na nnwale ahụ metara ihe ize ndụ dị ntakịrị (MN Meyer 2015) . Ma ha nwere ike ime mkpebi a ọbụlagodi na ha amaghị oke ihe ize ndụ . Enwere ike itinye aka na Encore. Na mbụ, Enyịmebido rịọ na weebụsaịtị ndị a maara na ha ga-enwe mmetụta dị nro, dịka nke ndị otu agbụrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị machibidoro iwu na mba ndị nwere ọchịchị nchịkwa. Dị ka ndị dị otú ahụ, ọ bụghị ntakịrị ihe ize ndụ maka ndị na-aga na mba ụfọdụ. Otú ọ dị, nsụgharị nke Encore-nke naanị rịọrọ arịrịọ na Twitter, Facebook, na YouTube-bụ ntakịrị ihe ize ndụ n'ihi na a rịọrọ saịtị ndị ahụ ka ha na-eme nchọgharị n'oge nchọgharị weebụ (Narayanan and Zevenbergen 2015) .
Ihe nke abụọ dị mkpa mgbe ị na-eme mkpebi banyere ọmụmụ ihe na amaghị ihe ọ bụla bụ nchịkọta ike , nke na-enye ohere ka ndị nchọpụta gbakọọ ọnụ ọgụgụ dị elu ha ga-achọ iji chọpụta nchọpụta nke nha (Cohen 1988) . Ọ bụrụ na ọmụmụ ihe gị nwere ike ikpughe ndị na-etinye aka na ihe ize ndụ-ọbụna obere ihe ize ndụ-mgbe ahụ ụkpụrụ nke Ịba Ụba na-atụ aro na ị kwesịrị itinye mmanye dị nta iji nweta ihe mgbaru ọsọ gị. (Chee echiche azụ ka Belata ụkpụrụ na isi 4.) Ọ bụ ezie na ụfọdụ na-eme nnyocha nwere ibu na-eme ka ọmụmụ ha dị ka nnukwu dị ka o kwere, nnyocha ụkpụrụ ọma na-egosi na-eme nnyocha ga-eme ka ọmụmụ ha dị ka obere ka o kwere. Nchịkọta ike abụghị nke ọhụrụ, n'ezie, mana enwere ọdịiche dị mkpa n'etiti ụzọ e si jiri ya rụọ ọrụ na oge analog na otú e kwesịrị isi jiri ya mee taa. N'ime oge analog, ndị na-eme nchọpụta n'ozuzu ha mere nyocha ike iji jide n'aka na ọmụmụ ihe ha adịghị oke (ntụgharị, enweghị ike). Ma, ugbua, ndi oru nyocha kwesiri ime nyocha ike iji jide n'aka na omumu ha adighi oke (ya bu, ike karia).
Ogologo ihe ize ndụ dị nta na ike analysis enyere gị aka ịtụgharị uche na imepụta ọmụmụ ihe, mana ha anaghị enye gị ozi ọhụụ gbasara otu ndị nwere ike isi chee banyere ọmụmụ ihe gị na ihe ize ndụ ha nwere ike inweta site na itinye ya. Ụzọ ọzọ ị ga-esi merie enweghị mgbagwoju anya bụ ịnakọta ozi ndị ọzọ, nke na-eduga n'ịchọ nyocha na omume-nyocha ma nyochaa ọnwụnwa.
N'ime usoro ziri ezi-omume, nnyocha, na-eme nnyocha na-ewetara obere nkọwa nke ihe a chọrọ oru ngo nyocha na mgbe ahụ na-ajụ ajụjụ abụọ:
(Q1) "Ọ bụrụ na onye ị na-eche banyere ha bụ ndị a nwa akwukwo soò n'ihi na nke a nnwale, ị ga-achọ ka onye na-gụnyere dị ka a soò?": [Ee], [na enweghị m mmasị], [No]
(Q2) "Ì kwere na-eme nnyocha kwesịrị ikwe ka n'ihu na ihe a?": [Ee], [Ee, ma na-elezi anya], [m na na na na], [No]
N'ịgbaso ajụjụ ọ bụla, a na-enye ndị na-aza ajụjụ ohere nke ha nwere ike ịkọwa azịza ha. N'ikpeazụ, ndị nabatara-ndị nwere ike ịbụ ndị nwere ike ịbanye ma ọ bụ ndị mmadụ na-enweta site na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na microtask (dịka, Amazon Mechanical Turk) -nwe ụfọdụ ajụjụ igwe mmadụ (Schechter and Bravo-Lillo 2014) .
Usoro nyocha nke usoro ihe omume nwere atụmatụ atọ nke mchọtara mmasị. Nke mbụ, ha na-eme tupu a eduzie ọmụmụ ihe, ya mere, ha nwere ike igbochi nsogbu tupu nchọpụta ahụ amalite (kama ịbịaru nso na nyochaa maka mmeghachi omume ọjọọ). Nke abụọ, ndị nabatara nyocha nyocha nke omume na-abụkarị ndị na-eme nchọpụta, ya mere nke a na-enyere ndị nchọpụta aka ịhụ ọmụmụ ha site na ọha mmadụ. N'ikpeazụ, nnyocha nyocha nke omume na-enyere ndị na-eme nchọpụta aka ịmalite ọtụtụ nsụgharị nke ọrụ nyocha iji nyochaa nghota nghota nke nsụgharị dị iche iche nke otu ọrụ ahụ. Otú ọ dị, otu njedebe, nke nnyocha nyocha-omume bụ na ọ bụghị ihe doro anya iji kpebie n'etiti atụmatụ nchọpụta dị iche iche e nyere nyocha ahụ. Ma, n'agbanyeghị enweghị ike ndị a, nyocha nyocha gbasara omume na-egosi na ọ bara uru; n'eziokwu, Schechter and Bravo-Lillo (2014) akụkọ na-ahapụ ọmụmụ ihe a na-eme iji mee ihe maka nchegbu nke ndị na-ekere òkè na-eme nyocha nyocha.
Ọ bụ ezie na nyocha nyocha nke omume nwere ike inye aka maka nyochaa mmeghachi omume na nchọpụta e mere atụmatụ, ha enweghị ike ịlele ihe puru omume ma ọ bụ nnukwu ihe ọjọọ. Otu ụzọ ndị na-eme nchọpụta ahụike si emeso enweghị mgbagwoju anya na ntọala ndị dị elu bụ iji mee ule a na-anwale - na-abịaru nso nke ahụ nwere ike inye aka na nchọpụta ndị mmadụ. Mgbe ị na-anwale irè nke ọgwụ ọhụrụ, ndị na-eme nchọpụta adịghị adaba ozugbo na nnukwu ikpe ụlọ ọgwụ. Kama nke ahụ, ha na-ebute ụzọ ọmụmụ abụọ. Na mbido, n'ime oge m na-ekpe ikpe, ndị na-eme nchọpụta na-elekwasị anya karịsịa n'ịchọta ọgwụ dị mma, ọmụmụ ihe ndị a gụnyere mmadụ ole na ole. Ozugbo e kpebisiri ike inweta ọgwụ dị mma, nchọpụta nke abụọ nke abụọ na-enyocha ịdị irè ọgwụ ahụ; ya bụ, ike ya ịrụ ọrụ n'ọnọdụ kacha mma (Singal, Higgins, and Waljee 2014) . Naanị mgbe a mụsịrị akwụkwọ m na II ka e mechara bụ ọgwụ ọhụrụ a ga-enyocha na nnukwu ikpe a na-achịkwa. Ọ bụ ezie na nhazi nke ọkpụkpụ a na-eji etinye aka na ịmepụta ọgwụ ọhụrụ nwere ike ọ gaghị adịrị mma maka nchọpụta mmadụ, mgbe enwere obi abụọ, ndị na-eme nchọpụta nwere ike ịme obere nnyocha e mere maka nchebe na nrụpụta ọrụ. Dị ka ọmụmaatụ, na Encore, ị nwere ike iche na ndị na-eme nchọpụta na-amalite site na ndị so na mba nwere iwu iwu siri ike.
Otu n'ime ihe anọ ndị a-njedebe ihe ize ndụ dị nta, nchịkwa ike, nchọpụta nchịkwa-nzaghachi, na ịnwale ule-nwere ike inyere gị aka ịmalite n'ụzọ ziri ezi, ọbụna n'agbanyeghị enweghị mgbagwoju anya. Enweghị njide n'aka ekwesighi iduga nkwụsị.